किन बढ्दै छ स्थानीय तहमा विवाद ? - Nayapulonline
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारले गर्दै आएका कतिपय कामहरु स्थानीय तहको जिम्मामा पुगेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा कामको बाँडफाँडका विषयमा विवाद आउने गरेको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले नगर प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु र सदस्यहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेको छ । तरपनि सजिला काम गर्न पदाधिकारीहरुबीच होडबाजी चल्ने र विग्रेका तथा अप्ठेरा काम गर्न पछि हटने अवस्थाले विवाद उत्पन्न हुनेगरेको देखिन्छ ।
यसबाहेक पनि कतिपय अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत विषयमा पनि विवाद हुने गरेको छ । खासगरी फरक दलका प्रमुख र उपप्रमुख हुने स्थानीय तहमा विवाद बढी देखिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कतिपय स्थानीयत तहमा अझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन सकेको छैन् । कतिमयमा बजेट पास भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर देखिएका छन् ।
स्थानीय तहमा विवाद् उत्पन्न हुनुका कारणहरुः
१. अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने,
२. एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु,
३. स्रोत साधानको दोहनको तानातान,
४. सेवा सुविधाका विषयमा हुने विवाद,
५. दैनिक खर्च प्रणालीमा हुने विवाद,
६. आयोजनाको छनोट र प्राथमिकताका विषयमहरुमा विवाद् ।
यसबाहेक कार्यपालिका बैठकमा पेस हुने एजेन्डा वा अरु कुनै फाइल सदर हुनुभन्दा पहिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले थाहा पाउनुपर्छ या पर्दैन भन्नेमा पनि कतिपय स्थानीय तहमा विवाद देखिएको छ । कतिपय नगरपालिकामा मेयरले गर्ने निर्णयमा उपमेयरले असहयोग गर्ने र उपमेयरका कतिपय कुराहरु मेयरले नसुन्ने प्रवृति पनि देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यस्तै अवस्था आउँदा कतिपय आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा विवाद हुँदा पोखरा उपमहानगरपालिकामा पदाधिकारीहरुले तालाबन्दी नै गरे ।
स्थानीय तहमा विवाद हुनुको कारण पुरुष र महिलाबीच हुने विवाद पनि एक हो । महिला भएकै कारण हेपिएको गुनासो कतिपय उपप्रमुखहरुको छ । प्रमुख तथा अध्यक्षले थाहै नदिएर कामगर्ने हेपाहा र व्यक्तिवादी प्रवृति रहेको कतिपय उपप्रमख तथा उपाध्यक्षहरु बताउँछन् । सल्लाह गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि निर्णय गरेर बोधार्थ पठाएझैं गर्ने कतिपयको गुनासो छ । यस्तो गुनासो फरक दलबाट नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट बढी आउने गरेको छ । कतिपय नगरपालिकामा यस्तो विवाद स्पष्टसँग देखिएको छ ।
विवाद सबै स्थानीयत तहमा देखिएको छ भन्ने हैन् । तर कतिपय स्थानीय तहमा विवाद हुँदा समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थाले स्थानीय विकासका कामरु प्रभावित भएका छन् । अर्थविद डा. शंकर शर्माले स्थानीय तहमा बजेटको निर्माण प्रकृयाका विषयमा राम्रो ज्ञान जनप्रतिनिधिसँग नहुँदा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै फरक राजनीति दलबाट चुनिएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच असहयोग गर्ने राजनीतिक लक्ष्य पुरा गर्नका लागि विवाद हुने गरेको उहाँको तर्क छ । यसबाहेक विवादमा नहल्झिएका स्थानीय तहहरुले राम्रोसँग काम गरिरहेको समेत शर्माले बताउनुभयो ।